Sida loo qaabeeyo compton si looga fogaado dib u ciyaarista fiidiyowga ee macaan | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo dajiyo compton si looga fogaado dib u ciyaarista fiidiyoowga ah
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Ma waxaad tahay isticmaale ka mid ah Linux distro fudud oo ma isticmaashaa Xcompmr inaad yeelato qalabka wax lagu qoro (daahfurnaanta, hooska, iwm)? Waxaa macquul ah, inaad ku xanuunsato waxqabadka liita ee xcompmgr, natiijada qaladaadka tirada badan ee ay sidato.
Mashaariicdii kale, oo ku dhashay fargeetooyinka xcompmgr, waxay ku guuleysteen inay xalliyaan inta badan khaladaadkan oo xitaa waxay ku dareen xoogaa horumar ah oo muuqda. Waa kiiska xcompmr-dana iyo isku xidh, gaar ahaan tan dambe.
Fiidiyowga caleemaha caadiga ah
2 Adoo adeegsanaya mishiinka haya'da glx
3 Ciyaarta fiidiyowyada
Ku rakibida Arch iyo noocyada:
yaourt -S compton-git
Si aad uhesho compton, kaliya saxo feylka .config / compton.conf.
Adoo adeegsanaya mishiinka haya'da glx
Waxaan isticmaalaayay Compton mudo dheer badal ahaan xcompmgr. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo Compton uu ka fiicnaaday xcompmgr, HD fiidiyaha fiidyowga ayaa wali ku liitay iftiinkeyga qaaliga ah Manjaro ee leh LXDE. Waxbaa khaldamay
Halkaas ayay ku ogaatay in Compton uu la yimaado laba matoor wax soo saar: dhiibid y glx (taas oo ka dhigaysa isticmaalka 'Opengl'). Baahnayn in la sheego, mashiinka glx wuu ka dhakhso badan yahay xrender. In kasta oo ay wali kujirto wajigii "tijaabo", uguyaraan kiiskeyga waxay isu rogtay mid deggan.
Si aad u isticmaasho glx waxaad u baahan tahay inaad isbedel ku sameyso feylka qaabeynta.
Dhamaadka feylka, waa inaan ku darnaa:
backend = "glx"
vsync = "opengl";
glx-no-rebind-pixmap = true;
glx-swap-method = "exchange";
Waa suurtagal in lagu daro xulashooyinka kale ee qaabeynta ee sida ugu habboon ugu habboon kiiskaaga. Kuwa doonaya inay bartaan sida si buuxda loogu qaabeeyo Compton, waxaan soo jeedinayaa inay fiiriyaan Arki wiki iyo Compton wiki. Halkaas waxaad ka heli doontaa macluumaad aad u qiimo badan.
Faylkeygii isku xirnaa ee Compton oo dhameystiran ayaa haray sidaas.
Si aad u aragto isbeddelada, waa inaad dib u bilowdaa compton. Tan waxaa lagu dhammaystiray sidan:
Kadib, adoo riixaya Alt + F2 oo galaya "compton" (xigashooyinka la'aan).
Ugu dambeyntiina, waxay ahayd inaan isbedel yar ku sameeyo fiidiyowgeyga fiidiyowga (SMPlayer) si aan uga faa'iideysto si buuxda isbeddelada lagu sameeyay Compton.
Waan aaday Xulashooyinka> Xulashooyinka> Fiidiyowga> Darawalka bixitaanka oo doortay ikhtiyaarka gl. Sida laguugula taliyay Compton wiki, haddii kaarkaaga uu taageerayo waxaa fiican in la isticmaalo VDPAU. Kaarkayga nVidia wuu yara yaraaday sidaa darteed waa inaan ku dhegtaa gl.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo dajiyo compton si looga fogaado dib u ciyaarista fiidiyoowga ah
Boosto aad u fiican. Wax dhib ah kuma qabin fiidiyowga, laakiin waan waayey waddo aan si fiican ugu shaqeeyo miiskeyga jilicsan ee Compton.
Ku jawaab cooper15
aan isticmaalno Linux dijo
Si loo xaliyo dhibaatadan, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso
Mahadsanidiin inbadan ayaan fiirin doonaa.
suurta gal ma tahay in loo isticmaalo gnome?
Ku jawaab lolivoice
Xidhiidhka faylkaaga qaabeynta ayaa hoos u dhacaya.
Jawaab ku ridri
Waxay u shaqeysaa si qumman ... iskuday markale
Isticmaalayaasha amd, haddii ay adeegsadaan darawalka bilaashka ah, labadaba xv iyo opengl wax soo saar ayaa la arki doonaa iyadoon jeexjeexin isla markaana chrome flash sidoo kale, tan iyo markii ay isticmaasho vsync u gaar ah (midka isticmaala firefox ma isticmaalo), inkasta oo dhaqdhaqaaqa daaqadaha uu yeelan doono jeexjeexan.
Haddii aad isticmaasho darawalka xiran, si fudud u riix ilmada xorta ah waana intaas, ka dibna ku dheji compton furfurnaanta iwm.
Galab wanaagsan, ma heli karo feylka qaabeynta Compton, waxaan ka imid Manjaro Xfce… Si aan u maamulo Compton waxaan ku soo galaa amar, marka waligey uma baahnin inaan raadiyo feylkaan qaabeynta…
~ / .config / compton.conf ama ~ / .compton.conf, labadaba ma jiraan ama way banaan yihiin ... Waan ku faraxsanahay wixii caawimaad ah ...
Sidee la yaab leh ... kuwani waa 2-da meelood ee badanaa lagu kaydiyo.
Sidoo kale, layaab ma noqonayso haddii aanu jirin. Waa inaad abuurtaa. 🙂
Haa, waxaan ku dhex abuuray / ku sameeyay guriga qaabeynta halkan ku qoran oo waxaan ku billaabayaa compton -b. Jeexitaan ma jiro markaan dhaqaaqo daaqad, si dhib leh lama arko markaan daawado fiidiyowyada internetka, laakiin markaan daawado fiidiyowyada HD waxay umuuqdaan isku mid. Waxaan haystaa VLC laakiin xulashada openGL maadaama wax soo saarku u egyahay. Way fiicnaaneysaa wax badan, laakiin hubaal waa inaan sameeyaa qaabeyn dheeri ah ...
Suurtagal In VLC ma aanan tijaabin.
Sidoo kale, waxaan kugula talin lahaa inaad awood u siiso "decoding hardware" ee VLC oo aad ka joojiso subtitles-ka SAA (ama wax la mid ah, ma xasuusan karo magaca).
Jamin Fernandez (@amiinSamuel) dijo
Waad salaaman tahay su'aal, sidee noqonaysaa nidaamka lagu rakibo Xubuntu 14.04?
Jawaab Jamin Fernandez (@JaminSamuel)
Ugu horreyntii, waa inaad joojiso muusigga daaqadda XFCE ka dibna rakib compton (adoo adeegsanaya xarunta softiweerka ama la socota sudo apt install compton).
Ugu dambeyntii, si aad u bilowdid, kaliya ku qor "compton" (xigasho la'aan) boosteejada.
Waxaan kuu daayay xiriiriye (oo af-ingiriisi ah) oo aan filayo inay waxtar badan yeelan karto: http://duncanlock.net/blog/2013/06/07/how-to-switch-to-compton-for-beautiful-tear-free-compositing-in-xfce/
Ku rakibida Debian ka Distro kale adoo isticmaalaya Debootstrap
Dib u eegid: toddobaad leh Firefox OS